Izincwadi ezihamba phambili ze-Essay
Amanoveli ezindaba eziqanjiwe zesayensi
I-Prometheus, nguLuis García Montero
UJesu Kristu wanqoba izilingo zikadeveli ezingenakuvinjelwa kakhulu ukuze asindise isintu. U-Prometheus wenza okufanayo, futhi ethatha isijeziso esasizofika kamuva. Ukuhoxiswa kwenza inganekwane kanye nenganekwane. Ithemba esingalithola ngempela esikhathini esithile ngalolo hlobo lobuqhawe salifunda izikhathi eziningi nokuthi...
On Time and Water, ngu-Andri Snaer Magnason
Ukuthi kubalulekile ukubhekana nenye indlela yokuhlala kule planethi, akukho kungabaza. Ukudlula kwethu emhlabeni kuphawulwe ngezimpawu zomhlaba njengezimpawu njengoba zingenakuqhathaniswa uma sibona ukulingana kwesikhathi sethu nendawo yonke. Ayibalulekile futhi inamandla okushintsha yonke into. Umhlaba uzosinda kithi futhi sizoba ...
Ungayibhala kanjani i-eseyi
Isisho esithi `` Kuzofanele ngibhale incwadi '' sikhomba embonweni walokho okuye kwahlangenwe nakho okwehlukile. Okuthile lapho ubufakazi nje obubeka mnyama kokumhlophe kungenza bona kanye onkulunkulu base-Olympus bathuthumele. Bese kuba khona enye inkulumo ethi «Noma yiluphi usuku ngiqala ukubhala ...
Niadela, nguBeatriz Montañez
U-Beatriz Montañez ulalele lelo phimbo elingaphakathi kwesinye isikhathi eliye lisuke ekuhlebeleni liye ekumemezeni phakathi komsindo ovela ngaphandle. Futhi qaphela ukuthi lapha omunye unqume ukuthi lowo owethula i- «El Intermedio» ecabanga ukuthi ukubheja kwakhe okusha kobuchwepheshe bekungeke kube kuhle kakhulu lapho enyamalele ...
Izinyathelo: Ekufuneni Umhlaba Sizoshiya Ngemuva, nguDavid Farrier
Bazosibona kanjani ngokuzayo? Ngamanye amagama, kuyindaba yokucabanga umuntu osemusha kusukela ngonyaka ka-3024, noma ngabe unhloboni yezinhlobo, phambi kwencwadi yokufunda efunda ngesintu esasihlale emhlabeni ngesikhathi sibubula endaweni yonke. Mhlawumbe osemusha uzocabanga ukuthi umangele ...
Ngiyakujabulisa, nguCarlos del Amor
Bafika bacekele phansi yonke into emibukisweni yezincwadi. Ngikhuluma ngabalingiswa bezindaba abaphila ngenhlanhla ehlukile kulezi zincwadi. Kusuka ku- Carme Chaparro ngisho noMonica Carrillo noma uCarlos del Amor ngokwakhe (ngiyenqaba ukucaphuna amanye amacala angakhulumeki adumile, afafazayo ...
Umsuka Wabanye, nguToni Morrison
Ukufika esikhaleni sokuzijwayeza, uToni Morrison ungene emcabangweni olula, owabanye. Umqondo ogcina ulungise izici eziyisisekelo njengokuhlangana emhlabeni womhlaba jikelele noma ukuxhumana kuwo wonke amazinga phakathi kwamasiko ahlukene. Yilokho okwamanje, ukuxhumana phakathi kwezinhlanga, imfundo, ...
Ukusesha Nokuzindla, nguSam Bleakley
Umhleli uSiruela usanda kusinikeza incwadi Ukubhukuda Emanzini Avulekile, isingeniso esithandekayo olwandle njengesikhala phakathi kwenyama nengokomoya kwanoma imuphi umuntu ongena emanzini olwandle oluvulekile. Futhi kulokhu umshicileli ofanayo usimemela ku ...
Ubushiqela obungenabushiqela, nguDavid Trueba
Ngemuva kwenoveli yakhe yangaphambilini iTierra de Campos, uDavid Trueba uthatha ikhefu maqondana nenganekwane yokwethula incwadi enezifiso nezincomo zezenhlalo. Imayelana nokucabanga kancane nge-transcendental, mayelana nama-nuances wokulingana phakathi kwe-anthropological kanye ne ...
Izikhala zenkululeko, nguJuan Pablo Fusi Aizpurúa
Kwakunesikhathi lapho ubuciko namasiko ayehamba khona njengokuyalelwa yigunya. Kuthukuthele kakhulu ukuphakama kwabanye abaningi okwenziwe umbuso kaFranco. Ukulawulwa kwazo zonke izinkulumo ezithandwayo kwakuyingxenye yalesi sizinda ngaphezu kokwazi kwe ...
Isizathu sobuhle, nguChantal Maillard
Ama-idiosyncrasies wedolobha ngalinye, amakwe yimifanekiso egcwele izimpawu kanye nezinkomba zabanduleli ababehlala endaweni efanayo, kancane kancane yavula i-hodgepodge, uma kungenjalo ukufana, namanye amadolobha asezindaweni ezinethonya eliya ngokuya libanzi. Namuhla…
Ikhasi1 Ikhasi2 Okulandelayo →
Kusukela ngo-2005 © Juan Herranz 2022
Ikhasi elilandelayo "
iphutha: Akukho ukukopisha